OPPO Reno 5G: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
OPPO emeworị ememme ngosi na China nke Reno nso. Chinesedị ndị China ahapụlarị anyị na ekwentị na-enye aha ya na nso a, nke pụtara maka igwefoto ya n'ihu yana sistemụ ọ na - eji. Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ihe anyị nwere ike ịmata n'akụkụ ya na mmemme ngosi a. Ha hapụrụ anyi ohuru ohuru ha, OPPO Reno 5G.
A nụrụ ya n’izu gara aga na a ga-enwe OPPO Reno na m na-aga nwee nkwado 5G.N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ eziokwu, ebe ọ bụ na egosipụtakwara ihe nlereanya a na ihe omume a na China. A elu-ọgwụgwụ na nzo na otu imewe dị ka ndị ọzọ na ekwentị, na na doo anyị na oké nkọwa.
Ọ bụ ezie na na nke a, ọ nwere ike ịbụ igwefoto na-ewepụta mmasị kachasị. Ka ọ na-aza izu ndị a, anyị na-ahụ 10x ngwa anya mbugharị technology nke ika na otu. A technology na OPPO eze ọkọnọ na MWC 2019 nakwa na ha mechara webata n’otu n’ime ekwentị ha.
1 Nkọwapụta OPPO Reno 5G
Nkọwapụta OPPO Reno 5G
Na ọkwa teknụzụ, anyị dị elu karịa njedebe niile. Ama ama di ike, nke gha gha inye ezigbo oru. Ya mere, nke a OPPO Reno 5G enweghị ihe ọ bụla nwere anyaụfụ na ụdị dị elu nke ụdị ndị ọzọ. Dịka anyị na-ahụ ọtụtụ na mpaghara a, igwefoto na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ekwentị. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: AMOLED 6.6 sentimita asatọ na mkpebi FullHD + 2.340 x 1.080, 387 dpi na Corning Gorilla Glass 6 nchedo
Nchekwa ime: 128/256GB
Rear igwefoto: 48 MP Sony IMX586 na oghere f / 1.7 + 13 MP periscope zoom na oghere f / 3.0 + Angular: 8 MP na oghere f / 2.2 na mbugharị anya 10x
Batrị: 4.065 mAh na Ndenye Nchaji VOOC 3.0
Njikọ: WiFi 2.4 / 5.1 / 5.8 GHz, Bluetooth 5.0, GPS ugboro abụọ, USB-C
ndị ọzọ: Mkpịsị aka na-agụ n'okpuru ihuenyo, ọdịdị ihu, NFC
Usoro njikwa: A gam akporo na agba OS
Akụkụ: 162 x 77.2 x 9.3 mm
Ibu ibu: 210 grams
Ekele maka imewe a, site na igwefoto etinyegoro n'ụzọ a, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ a na-eji ihu ekwentị nke ọma. Anyị nwere ihuenyo nwere okpokolo agba pere mpe, nke nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke n'ihu ngwaọrụ ahụ. Ya mere, nke a OPPO Reno 5G dị nnọọ nso na echiche nke ihe niile na ihuenyo ama na gam akporo.
Ekwentị ghọrọ onye mbụ nke ika nwere 5G. Iji mee nke a, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, a na - eji Snapdragon 855 dị ka ihe nhazi, na mgbakwunye na iji modem ahụ na - enye ohere ọrụ a na ngwaọrụ. Yana processor anyị nwere ọtụtụ njikọta nke RAM na nchekwa, yabụ ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ. Gbakwunye batrị 4.065 mAh, nke n’enweghi mgbagha n’enye anyi nnukwu ikike ime obodo n’oge obula. Karịsịa na njikọta na nhazi na gam akporo.
Igwefoto bụ otu n'ime ike nke OPPO Reno 5G. A na-eji igwefoto azụ atọ enwere na njedebe dị elu, nke anyị nwere ihe mmetụta sensọ MPN 48 MP, na-eji nke Sony. Mana nke kachasị, ọ bụ ọnụnọ nke teknụzụ mbugharị nke 10x nke na-eme ọtụtụ mmasị na mpaghara a. Ebe ọ bụ na ọ ga - enyere aka melite foto ndị a ga - eji ekwentị kpọrọ ọtụtụ. Na mgbakwunye, ọ ghọrọ nke izizi jiri akara teknụzụ a.
Dị ka anyị kwurula, nke a bụ ngosi na China. Na ngwụcha ọnwa Anyị ga-enwe ike izute nke a OPPO Reno 5G na Europe, na ihe omume na Zurich. Ma ugbu a, anyị nwere ọnụahịa nke ekwentị na China. Nke na - enyere anyị aka inweta echiche banyere akụkụ a, nke dị mkpa na nke a.
Ndị a bụ ọnụahịa nke nsụgharị atọ dị elu:
6/128 GB: 3.999 yuan (ihe dị ka euro 523 na mgbanwe)
6/128 GB: 4.499 yuan, ihe dị ka euro 594 ịgbanwe
8/128 GB: 4.799 yuan, ọnụahịa banyere 633 euro iji gbanwee
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OPPO Reno 5G: Akara ohuru ohuru a